Ogaden News Agency (ONA) – Jacob Zuma oo Qarka U Istaagay Waayitaanka Kalsoonida Baarlamaanka.
Jacob Zuma oo Qarka U Istaagay Waayitaanka Kalsoonida Baarlamaanka.
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa ka badbaaday codka kalsoonida oo ay u qaadeen baarlamaanka dalkaasi oo kulan ku yeeshey magaalada Cape Town.
Codbixintan oo u dhacday si qarsoodi ah markii ugu horeysey ayaa xisbiyada mucaaradka waxa ay rajo ka qabeen in xildhibaanada ku jira xisbiga talada haya ay ka codeyn doonaan Zuma, balse taasi ma aysan dhicin. 198 xildhibaan ayaa codka kalsoonida siiyey madaxweynaha, halka 177 kale ay kala laabteen, sidaasina waxa uu uga badbaaday in kalsoonida lagala noqdo .
Si uu u meelmaro codka kalsoonida madaxweynaha waxaa loo baahnaa 201 cod. Xisbiga talada haya ee Koonfur Afrika ee ANC ayaa aqlabiyadda ugu badan ku leh baarlamaanka, waxaana dhacday in illaa 30 xildhibaan oo ANC ka tirsan ay ka codeeyeen Zuma, balse taasi kuma aysan filneyn in madaxweynaha xilka laga qaado.
Zuma ayaa lagu eedeeyey arrimo musuqmaasuq iyo dambiyo kale, kuwaasi oo dhammaantood uu diidey madaxweynaha in uu gaystey.